Maamulka iyo shacabka Mudug oo ka tashanaya kaalintii ay banaysay MSF ee Cisbitalka Galkacayo – Radio Daljir
Maamulka iyo shacabka Mudug oo ka tashanaya kaalintii ay banaysay MSF ee Cisbitalka Galkacayo
Oktoobar 20, 2013 6:37 b 0
Galkacayo, October 20, 2013 – Maamulka gobolka Mudug iyo saraakiisha caafimaadka ee isla gobolkaas ayaa bilaabay qorshe dadaalo ah, kaas oo lagu raadinayo buuxinta kaalintii ay banaysay hay?adda MSF ee gacanta ku haysay qeybo ka mid ah cisbtilka Galkacayo.
Maamulka ayaa bilaabay la kulanka hay?adaha, shirkadaha ganacsiga iyo ururada bulshada rayidka ah ee gobolkaas.
Hugaamiyaasha degmada galkacayo iyo kuwa gobolka mudug ayaa maanta kulan kula qaatay qaybaha bulshada iyo hay?adaha xaruunta gobolka, waxaana diirada lagu saaray kulanka intiisa badan sida ugu haboon ee bulshada deegaanka, hay?adaha caafimaadka iyo cid walba oo awooda sida ay uga qayb qaadan karaan dardar gelinta kaalintii ay banaysay MSF ee cisbitalka.
Gudoomiye ku xigeenka gobolka Mudug Farxaan Cali xirsi ayaa ku dhawaaqay kulamada, qorshayaasha, iyo dadaalada ay ugu jiraan in ay isku tashato bulshada ayna qabsadaan wax walba oo mustaqbalkooda iyo noloshooda ku xiran yahay, waxaa uu bulshada ka codsaday in ay soo jeensadaan howlaha cisbitalka galkacayo.
Dhegeyso: Gudoomiye ku xigeenka gobolka Mudug Farxaan Cali Xirsi oo hadlaya